News Collection: केही त्यस्तो घरेलु उपाय छैन, जसबाट म आफ्नो यौनचाहना पूरा गर्न सकूँ ?
केही त्यस्तो घरेलु उपाय छैन, जसबाट म आफ्नो यौनचाहना पूरा गर्न सकूँ ?
म २१ वर्षीय अविवाहित युवती हुँ। म यौनका कुरा सुन्दा एकदमै उत्तेजित हुन्छु, जसले गर्दा मेरो ध्यान पढाइतिर जाँदैन। केही त्यस्तो घरेलु उपाय छैन, जसबाट म आफ्नो यौनचाहना पूरा गर्न सकूँ ?
यौन चाहना किन हुन्छ ?
यौन मानव जीवनको अभिन्न अङ्ग हो, त्यसैले यौनेच्छा हुुनु, यौनका कुरा सुन्दा उत्तेजित हुनु एकदम स्वाभाविक हो। भोक, निद्रा, प्यासजस्तै यौन पनि आवश्यक कुरा हो, मानवजीवनका लागि प्रकृतिले नै दिएको। सामान्य भाषामा भन्दा यौनसम्पर्क राख्ने वा यौनतनाव शान्त पार्ने इच्छालाई नै यौनेच्छा भन्न सकिन्छ। परिभाषामा केही फरक-फरक मत भए पनि यौनेच्छा वा यौन व्यग्रता एक मानसिक तथा भावनात्मक जैविक व्यग्रतासँग सम्बन्धित स्वाभाविक शक्ति हो। यो प्राकृतिक शक्ति वा व्यग्रताले निश्चित कार्यका लागि अभिप्रेरित गर्छ। यसलाई हाम्रो मस्तिष्कले सञ्चालन गर्छ। मोटामोटी रूपमा हेर्दा यौनेच्छाको सञ्चालनमा विभिन्न प्रणाली सक्रिय देखिन्छन्। एक त भलमयअचष्लभ कथकतझ -इन्डोक्राईन सिस्टम) अन्तर्गतका रागरसहरूले यसको सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् भने अर्कातिर इन्दि्रय प्रणालीका अनि मस्तिष्कले। वैज्ञानिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यौन उत्तेजनालाई 'स्नायु प्रणाली तथा यौनअङ्ग संलग्न एक जटिल प्रक्रियाको क्रियाशीलता हो' भनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ।
कसरी चाहना पूरा गर्ने ?
यौनचाहना स्वाभाविक कुरा भएकाले यसलाई दबाउनु आवश्यक छैन। यौनेच्छा शान्त पार्ने उपायहरूमध्ये सबैजसोका लागि यौन अङ्गको घर्षण नै प्रमुख उपाय रहँदै आएको छ। यौनसम्पर्क गर्दा यौन अङ्गहरू एक-आपसमा घर्षण गराइन्छ भने हस्तमैथुन गर्दा हातले वा अन्य तरिकाबाट नै आफ्नो यौनअङ्गको घर्षण गराएर वा दबाब दिए यौन आनन्द तथा यौन चरमसुख पनि प्राप्त गर्छ। तपाईंले घरेलु उपायको कुरा गर्नुभएको छ, अर्को व्यक्तिसँगको यौनसम्पर्क पनि घरेलु हुन सक्छ तर अर्को व्यक्ति संलग्न हुने भएकाले तथा अन्य कतिपय सामाजिक नियमभित्र बा ँधिनुपर्दा सजिलै यौनसम्पर्क गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। त्यसमा पनि अविवाहित युवतीका लागि यो अझै टाढाको कुरा हुन आउँछ। यस्तो उपायको कुरा गर्नासाथ धेरैजसो सोचमा यौनसम्पर्क नै आए पनि हस्तमैथुन राम्रो विकल्प हो।
हस्तमैथुन कसरी गर्ने ?
पुरुषको तुलनामा महिलाहरूको हस्तमैथुन गर्ने तरिकामा बढी विविधता हुन्छ। महिलाहरूले विभिन्न यौनअङ्गलाई प्रयोगमा ल्याई हस्तमैथुन गरेको देखिन्छ। हस्तमैथुन गर्दा यौन परिकल्पना महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हस्तमैथुन गर्दा आफूले चाहेअनुरुप्ा यौन क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति, स्थान अनि आसनको कल्पना गर्न सकिन्छ र यसमा मानसिक पक्ष सबल रूपमा जोडिएर थप आनन्द आउँछ।
भगांकुर चलाउनु वा त्यसको घर्षण नै महिला चरमसुखमा पुग्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण यौन क्रियाकलाप हो। यो यस्तै ९० प्रतिशत महिलाको यौन संवेदनशीलताको केन्द्र हो। आफूलाई सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुराले यसलाई चलाउन सकिन्छ। चलाउने वा घर्षण गर्नेबाहेक दबाब दिने, बिस्तारै हल्लाउने वा जोडले हल्लाउने वा यसलाई कुनै वस्तुमाथि थिच्नेजस्ता अनेक उपाय गर्न सकिन्छ। पानीको हल्का फोहराको प्रयो गलाई पनि कतिपय महिलाले विशेष उत्तेजना प्रदान गर्ने कुराका रूपमा लिएका छन्।
योनिमा केही पसाएर यौन आनन्द प्राप्त गर्नु अर्को प्रमुख उपाय हो। यसो गर्दा योनिमा पर्याप्त मात्रामा रस आइसकेको हुनुपर्छ र यौन उत्ते जना हुँदा यो स्वाभाविक रूपमै हुन्छ। यस्तो नभएको स्थितिमा अन्य कुनै चिप्लो पदार्थ प्रयोग गर्न भने बिर्सनु हुँदैन। यस्तो पसाउने कुरा सफा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। औंला पसाउँदा आफूलाई आनन्द प्राप्त हुने स्थान -योनिमा) खोज्न सकिन्छ जुन सामान्यतः योनिको अगाडितिरको भित्तामा केही भित्र जघनास्थी -उगदष्अ) र पाठेघरको मुखको बीचतिर हुन्छ। यसरी हस्तमैथुन गर्दा केही महिलाले थप यौन उत्तेजनाका लागि स्तनलाई पनि प्रयोग गर्छन्।
भगांकुर होस् वा योनि, हस्तमैथुनमा औंलाको प्रयोग नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। औंला बहुउपयोगी हुने भएकाले नै चाहेअनुरूप दबाब, गति एवं शै लीमा गर्न सकिन्छ, जसले आनन्द थप्छ नै। यीबाहेक महिला शरीरका अन्य अङ्गहरूको स्पर्श, मर्दन वा सुमसुम्याइ यौन आनन्द प्राप्त गर्ने कुरामा सहायक नै हुन्छन्, तर अचेल यसरी यौन आनन्द लिने क्रममा महिलाहरूले यौन प्रसाधन वा वस्तुहरू पनि प्रयोग गर्न सक्छन्। कतिपयले पुरुषको लिङ्ग आकारको कृत्रिम वा प्राकृतिक वस्तु पनि प्रयोग गर्छन्। अंग्रेजीमा खष्दचबतयचक -भाइब्रेटर) भनिने यौन प्रसाधन विभिन्न किसिमका आकार-प्रकारमा पाइन्छन्।
हस्तमैथुन एउटा स्वाभाविक यौन व्यवहार हो। सिद्वान्ततः यौनसम्पर्क गर्दा र हस्तमैथुन गर्दा यौन अंगको घर्षणबाट यौन आनन्द प्राप्त गर्ने प्रक्रिया उस्तै हो। त्यसैले सम्भोग गर्दा हानि हुँदैन र हस्तमैथुन गर्दा हानि हुन्छ भन्न मिल्दैन।
हस्तमैथुनले कतै योनि खुकुलो हुन्छ कि भन्ने चासो पनि कतिपय युवतीमा पाइन्छ, जसमा सत्यता छैन। हस्तमैथुन गरे अनुहारमा दाग आउने, आँखाको दृष्टि कमजोर हुने, नपंुसक हुने, विवाहपश्चात् आफ्नो यौन साथीलाई सन्तुष्टि दिन नसक्ने वा शीघ्र स्खलन हुन्छ भन्ने जस्ता भ्रम व्याप्त छन्। हस्तमैथुनले यस्ता कुनै स्वास्थ्यसम्बन्धी हानि-नोक्सानी गर्दैन। कतिपय स्थानमा यो प्राकृतिक यौन क्रियाकलापको उपचार गर्ने चलन छ र प्रशस्त खर्च गर्ने गराउने पनि गरिन्छ, जुन आवश्यक छैन। सर्वप्रथम त हस्तमैथुनले यौनइच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ। तनावबाट मुक्त मान्छे बढी सकारात्मक रूपमा सिर्जनशील हुन सक्छ। यसले यौनचाहना शान्त पार्न मद्दत पुर्‍याउने भएकाले कतिपय यौन अपराधलाई कम गर्न सहयोग पुग्छ भन्नेहरू पनि थुप्रै छन्। यस्तै हस्तमैथुनले अनावश्यक गर्भधारण, देहव्यापारीसँगको यौनसम्बन्ध, यस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुने धन तथा समय दुरुपयोगवाट पनि बचाउँछ। अर्को व्यक्तिसँग यौनसम्पर्क नै नहुने भएकाले अहिले चर्चामा रहेका एड्स वा अन्य यौनरोगहरू लाग्नबाट पनि बच्न सकिन्छ। यौनेच्छा शान्त भएपछि बाँकी पूरै समय अध्ययनमा ध्यान दिन सकिन्छ- शुभकामना।